कहिले आउला चिनियाँ रेल ? यस्तो छ नेपालतर्फ तयारी - Saptakoshionline
कहिले आउला चिनियाँ रेल ? यस्तो छ नेपालतर्फ तयारी
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ २४, २०७४ समय: ७:०९:०६
काठमाडौंदेखि केरुङसम्मको अनुमानित सय किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माणका लागि २८० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । नेपालमा रेलमार्ग विकासबारे स्थलगत अध्ययन भ्रमणको गर्न गत कात्तिकमा नेपाल आएको चिनियाँ रेल्वे प्रशासनका उच्च तहका अधिकारीहरूले सो अनुमान गरेका हुन् । रेलमार्ग निर्माणपूर्व अध्ययनमा आवश्यक पर्ने वातावरणीय, भौगर्भिक, वनलगायत क्षेत्रका दक्ष विज्ञसहित आएको चिनियाँ टोलीले सो प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट